यिनै हुन् भूपेन्द्र ह,’त्यामा फरार रहेका नवीन, ‘नब्बु सरकार’को नाममा ठेकेदार थ’र्काउने हप्ता असुल्ने गर्थे - 4K News Nepal
मंग्सिर ७, २०७८ मंगलबार 49
Prev७ जनाको समुहले कु’ट’पि,ट ग’र्दा ५५ बर्षिय उर्मिलाको मृ,त्यु
Nextरेखा थापाले आफ्ना पूर्व पति छवि ओझालाई दिइन् जन्मदिनको शुभकामना, फेसबुकमा आयो यस्तो प्रतिक्रिया
१. शरीर हेरेर प्रेम गर्दा धोका पाइदो रहेछ, माया गर्ने मान्छेसंग प्रेम गर्नुस कैले रुनुपर्दैन: नायिका पूजा शर्मा
२. पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, मंसिर १० गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
३. रहेनन् देशकै उत्कृष्ट न्यूरोसर्जनका डाक्टर , उनको निधनले चिकित्सा क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति
४. कुवेतमा ४ वर्षदेखि बन्धक बनाइएकी चेलीको घर पुग्दा यस्तो देखियो,छोराछोरी रु दै आमा खोज्दै छन् (भिडियो हेर्नुस्)
५. एमाले देश लु’टेको पैसाले नारायणीमा भोज गर्दैछ : रन्जित तामाङ